Ciidanka Kenya & Al-Shabaab oo dagaal culus ku dhexmaray gobolka Jubbada Hoose | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Ciidanka Kenya & Al-Shabaab oo dagaal culus ku dhexmaray gobolka Jubbada Hoose
Ciidanka Kenya & Al-Shabaab oo dagaal culus ku dhexmaray gobolka Jubbada Hoose
Dagaalka oo geystay khasaaro kala duwan ayaa waxaa degaannada Cabdalla Birooole iyo Qooqaani ee Gobolka Jubbada Hoose uu ku dhex-maray Ciidamada Kenya oo ka tirsan AMISOM, kuwa Jubbaland oo dhinac ah & Ururka Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid, kaddib markii sida la sheegay ay Al-Shabaab weerar ku qaadeen Saldhigyada Ciidamada Kenya iyo kuwa Jubbaland ee degaannada Cabdalla Biroole iyo Qooqaani ee Gobolka Jubbada Hoose, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xoogan oo muddo saacad ku dhow socday.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaas ay isku adeegsanayeen labada dhinac, sidoo kale ay jireen tiro madaafiic ah oo ay is weeydaarsadeen labada dhinac, balse aan la sheegin khasaaro dadka Rayidka ah kasoo gaaray dagaalka.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Jubbaland ayaa dhankooda waxaa ay sheegeen inay iska difaaceen weerarka kaga timid Al-Shabaab, isla markaana khasaaro gaarsiiyeen.
Wararkii ugu dambeeyay ee aan saaka ka heleyno degaannada Cabdalla Biroole iyo Qooqaani ayaa waxaa ay sheegayaan in dhaq dhaqaaqyo Ciidan iyo howlgallo ay halkaasi ka wadaan Ciidamada Jubbaland iyo kuwa Kenya.
Previous articleXOG: Sheikh Shariif oo Dalab culus hordhigay Cali Guudlaawe, Xilli khilaaf uu jiro